Windows တွင် ကိုယ်ပိုင် fonts ဖန်တီးနည်း myanmar it helper
Nyan Win Aung, Working
Windows တွင် ကိုယ်ပိုင် Fonts ဖန်တီးနည်း | Myanmar IT Helper http://www.mmithelper.blogspot.com/2013/01/windows-fonts.html . တွင် ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးနည်း Windows မှာ ကိုယ်ပိုင် Fonts ဖန်တီးချင်သူများအတွက် ပြုလုပ်နည်းလေးကို ပြည်ပ ဆိုဒ်တစ်ခုမှာတွေတဲ့အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.။ In windows operating system, there isahidden utility which lets the user to create custom fonts. So if you want to know how to create custom fonts, then read this post carefully. 1. Go to Start Menu and open RUN. Or press win key+R. 2. Type eudcedit and press enter. MirrorCreator Mediafire 3. A new window will appear to select code. Select any code you like. I have selected 1st, i.e. E000*0 Solidfiles Mediafire 4. Now your font editor will open. You can draw your character as you draw in mspaint.1 of53/4/2013 3:43 PM 2.
Windows တွင် ကိုယ်ပိုင် Fonts ဖန်တီးနည်း | Myanmar IT Helper http://www.mmithelper.blogspot.com/2013/01/windows-fonts.html This website is for Myanmar Nationalities and other visitors who are visiting here to get or improve IT knowledges , we are just here for supporting you visitors . And also we are warmly welcome you to give us suggestions and advising regarding our web site . Wish you all visitors to be wealthy and healthy forever.. မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင်ဧည့်သည်တော် နိုင်ငံခြားသား များITနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာဗဟုသုရရှိစေရန်အ တွက်တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှကြိုးစားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်... လိုအပ်သည်များရှိပါကလည်းအကြံပြုဆွေးနွေးပေးကြဖို့ကိုလ ည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်...လာရောက်လေ့လာသူများအားလုံးကို ယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ.. ..(IT Helper)3Mar 13, 10:09 PM kyawswarwin: website 45 ခုနဲ့ ချိတ်တယ့် android apk သတင်း ပြုလုပ်နည်း သိချင်ပါတယ်....thz mmit helper3Mar 13, 09:25 PM ITHelper: ဟုတ..ပေးတဲဆုနဲ့ပြည့်ပါစေခင်မျာ...စာမေးပွဲပြီးရင်ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့်နည်းပညာတွေ Hacking တွေ တင်ပေးသွားမှာပါ.စောင့်မျှော်လို့အားပေးပါဦးနော်..3Mar 13, 08:55 PM Lwin: ပွဲဖြေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျား။3Mar 13, 08:54 PM Lwin: တလက်စထဲပြောရဦးမယ်။ Window XP Pro Version တင်ပေးတဲအတွက်လဲကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။တကယ်ဆိုကျွန်တော်ISO Versionတောင်းရမှာပါ။ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေဆဲ တယောက်မို့မှားခဲ့ရင် ခွင့်လျွှတ်ပါ။အဲဒီအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ စာမေ3းMar 13, 08:30 PM Lwin: 5. After finishing the custom character/symbol, go to Edit and click Save Character. ကုန်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုကူညီပေးနေတာကိုဘဲ အစဉ်လေးစားကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်ခင်ဗျား။3Mar 13, 08:27 PM Lwin:ှုIT Helper ရေ ခင်ဗျားတို့ကိုဆဲစရာမလိုပါဘူး။အခုလိုအခမဲITနည်းပညာတွေအကူအညီေ့[Switchnode] refresh name e-mail / url message Go help · smilies · cbox 6. Now go to File and click Font Links. Website ၄၅ ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖတ်နိုင်မယ့် HWH v 2.2 ထွက်ပါပြီ Website နဲ့ ဘလော့ပေါင်း (၄၅)ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို Android သုံးတဲ့ Device ပေါ်ကနေ တစ်ချက် ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ယခင် ver... Android User Guide Ebook 2013 ( Myanmar Version )7MB ဆရာ ချစ်သောလူ ရေးသားတဲ့ Android User Guide မြန်မာလိုစာအုပ်လေးပါ...စာအုပ်ထဲမှာ ဖုန်းအမျိုးအစား ပေါင်း များစွာအတွက် Root လုပ်နည်းလိုမျိုး.... Computer နည်းပညာစာအုပ် အတိုအထွာများ မြန်မာလို (လိုချင်သူများ မြန်မြန်ဒေါင်းထားကြပါရန်) Computer2 of53/4/2013 3:43 PM 3.
Windows တွင် ကိုယ်ပိုင် Fonts ဖန်တီးနည်း | Myanmar IT Helper http://www.mmithelper.blogspot.com/2013/01/windows-fonts.html နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့လာနေသူများအတွက် အဖိုးတန်နည်းပညာ Android Application ( Myanmar Love Baydin v1.0 စာအုပ် အတိုအထွာ လေးတွေရှိတဲ့ Website)လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အမှန်တော့..W... Version အချစ်ဗေဒင်လေးပါ။ မိမိမွေးနေ.နဲ.မိမိချစ်သူမွေးနေ.တိ.ကိုထည်.ပြီုးထွက်ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်ကတော့ ထည့်ပြီး Android Market ကို ဖုန်းထဲက့ ဗျာ..... တွက်ကြည့်တာ ချစ်သူနဲ့ကွဲမတဲတစ်ချက်တည်း နဲ့ ၀င်မယ် ဒီ app လေးကို Android Device တွေ မှာ ထည့်ပြီး Android Market ထဲကို တိုက်ရိုက်ဝင်.. လိုချင်တာ တိုက်ရိုက်ဒေါင်း.. မကောင်းဘူးလားဗျာ.. နာမည... Website ၄၅ ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖတ်နိုင်မယ့် HWH v 2.2 ထွက်ပါပြီ Website နဲ့ ဘလော့ပေါင်း (၄၅)ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို Android သုံးတဲ့ Device ပေါ်ကနေ တစ်ချက် ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ယခင် ver... Android User Guide Ebook 2013 ( Myanmar Version )7MB ဆရာ ချစ်သောလူ ရေးသားတဲ့ Android User 7. Select from Link With All Fonts OR Link With Selected Fonts. I am selecting Link With All Guide မြန်မာလိုစာအုပ်လေးပါ...စာအုပ်ထဲမှာ Fonts. ဖုန်းအမျိုးအစား ပေါင်း များစွာအတွက် Root လုပ်နည်းလိုမျိုး.... Computer နည်းပညာစာအုပ် အတိုအထွာများ မြန်မာလို (လိုချင်သူများ မြန်မြန်ဒေါင်းထားကြပါရန်) Computer နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့လာနေသူများအတွက် AdInnwa အဖိုးတန်နည်းပညာ စာအုပ် အတိုအထွာ လေးတွေရှိတဲ့ Love Baydin v1.0 ပးလိုက်ပါတယ်...အမှ ( Myanmar Website လေးတင်ေAndroid Applicationန်တော့..W... Version ) အချစ်ဗေဒင်လေးပါ။ မိမိမွေးနေ.နဲ.မိမိချစ်သူမွေးနေ.တိ.ကိုထည်.ပြီုးထွက်ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်ကတော့ ထည့်ပြီး Android Market ကို ဖုန်းထဲက့ ဗျာ..... တွက်ကြည့်တာ ချစ်သူနဲ့ကွဲမတဲတစ်ချက်တည်း နဲ့ ၀င်မယ် ဒီ app လေးကို Android Device တွေ မှာ ထည့်ပြီး Android Market ထဲကို တိုက်ရိုက်ဝင်.. လိုချင်တာ တိုက်ရိုက်ဒေါင်း.. မကောင်းဘူးလားဗျာ.. နာမည... 8. Now your custom font symbol is saved in the pc. To use this custom symbol, open RUN as told above. Website ၄၅ ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖတ်နိုင်မယ့် 9. Type charmap and press enter. This will open character map. HWH v 2.2 ထွက်ပါပြီ 10. Now search for All Fonts (Private Characters). Website နဲ့ ဘလော့ပေါင်း (၄၅)ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို Android သုံးတဲ့ Device ပေါ်ကနေ တစ်ချက် ကလစ်လိုက်တာနဲ့ မြန်မာ့အိုင်တီနည်းပညာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ယခင် ver... Like Android User Guide Ebook 2013 ( Myanmar Version )7MB 2,492 people like မြန်မာ့အိုင်တီန ည်းပညာ. ဆရာ ချစ်သောလူ ရေးသားတဲ့ Android User Guide မြန်မာလိုစာအုပ်လေးပါ...စာအုပ်ထဲမှာ ဖုန်းအမျိုးအစား ပေါင်း များစွာအတွက် Root လုပ်နည်းလိုမျိုး.... Computer နည်းပညာစာအုပ် အတိုအထွာများ မြန်မာလို (လိုချင်သူများ မြန်မြန်ဒေါင်းထားကြပါရန်) Computer နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့လာနေသူများအတွက် အဖိုးတန်နည်းsocial plugin ပ် အတိုအထွာ လေးတွေရှိတဲ့ Facebook ပညာ စာအု Love Baydin v1.0 ပးလိုက်ပါတယ်...အမှ ( Myanmar Website လေးတင်ေAndroid Applicationန်တော့..W... Version ) အချစ်ဗေဒင်လေးပါ။ မိမိမွေးနေ.နဲ.မိမိချစ်သူမွေးနေ.တိ.ကိုထည်.ပြီုးထွက်ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်ကတော့ ထည့်ပြီး တွက်ကြည့်တာ ချစ်သူနဲ့ကွဲမတဲ့ဗျာ..... 2D Maker (2) 3D Maker (17) A+ Learning Games (1) Activator (17) 11. You will see your custom symbol there. Just click on that symbol, click Select and click Copy. Adobe (3) Adobe CS6 Activator (1) Alarm Clock Sof (1)3 of53/4/2013 3:43 PM 4.
Windows တွင် ကိုယ်ပိုင် Fonts ဖန်တီးနည်း | Myanmar IT Helper http://www.mmithelper.blogspot.com/2013/01/windows-fonts.html All Files To PDF Converter (1) Android Antivirus (2) Android App (50) Android Game (22) Android HD Game (3) Android Myanmar Fonts (1) Android Offical Firmware (2) Android Root (20) Android System Cleaner (1) 12. Now paste in your text editor. You will see your new custom symbol. Enjoy...!! Copy From AutoHacker! Like0Tweet00 comments: PostaComment Please Close And Exit Your Antivirus Before Using Crack , Patch And Keygen!4 of53/4/2013 3:43 PM 5.
Windows တွင် ကိုယ်ပိုင် Fonts ဖန်တီးနည်း | Myanmar IT Helper http://www.mmithelper.blogspot.com/2013/01/windows-fonts.html Comment as: Home Newer Post Older Post Copyright © 2013 Myanmar IT Helper | Designed By Mr.jockerlay5 of53/4/2013 3:43 PM Recommended